ⓘ အပူပိုင်းဒေသ ရောဂါများ
ကုံကုမံ သည် အဖိုးတန်သော ပန်းဝတ်ဆံ တစ်မျိုးဖြစ်၍ ယင်းတို့ကို ရှေးရောမနှင့် ဂရိလူမျိုးတို့ လက်ထက်မှ အစပြုကာ လိမ္မော်ရောင် ဆိုးဆေးအဖြစ် သော်လည်းကောင်း၊ အမွှေးနံ့သာ အဖြစ်သော် လည်းကောင်း ဘယဆေး အဖြစ်သော် လည်းကောင်း၊ အစဉ်အဆက် အသုံးပြုလာခဲ့ကြသည်။ ရှေးခေတ်ဂရိနှင့် အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတို့တွင် ကုံကုမံသည် အထက်တန်းကျလှသော ထီးသုံးနန်းသုံး ဆိုးဆေးဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်။ အိန္ဒိယနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒံပေါက်ထမင်း၌ ထည့်လေ့ရှိသဖြင့် လူသိများသည်။ ဤကဲ့သို့ ထမင်းဟင်းလျာများ၌ ထည့်သောအခါ ကုံကုမံတွင် အပူဓာတ် ပါဝင်သောကြောင့် အစာကြေသည်ဟု ဆိုသည်။ ကုံကုမံကို ကိတ်မုန့်၊ ချိုချဉ်သကြားလုံး စသည်များတွင်လည်း ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြသည်။ ...
Tuta absoluta သည် မျိုးရင်း Gelechiidaeတွင် ပါဝင်သော ပိုးဖလံမျိုးစိတ်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး tomato leafminer, tomato pinworm နှင့် South American tomato moth ဟူ၍ သိကြသည်။ ဥရောပ၊ အာဖရိက၊ အနောက်အာရှ၊ တောင်နှင့် ဗဟိုအမေရိကတို့ရှိ ခရမ်းချဉ်စိုက်ခင်းများကို ပြင်းထန်စွာ ဖျက်ဆီးတတ်သော ပိုးမျိုးအဖြစ်လည်း သိကြသည်။ ယင်း၏ ဘဝစက်ဝိုင်းတွင် အဆင့်လေးဆင့်ရှိပြီး ဥ၊ သားလောင်း၊ ပိုးတုံးလုံးနှင့် သက်ကြီးကောင် တို့ ဖြစ်သည်။ ဥများကို သစ်ရွက်အောက် သို့မဟုတ် ပင်စည်တွင် ဥလေ့ရှိသည်။ အကောင်ပေါက်ပြီးနောက် သားလောင်းသည် သစ်ရွက်၊ အသီး နှင့် ပင်စည်တို့ကို ထိုးဖောက်စားသုံးကာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာသည်။ ပိုးတုံးလုံးကောင် သည် ဆလင်ဒါပု ...
ဤအင်းဆက်များသည် လူသားများနှင့် တိရစ္ဆာန်များကို ကူးစက်ပြန့်ပွားစေသော ကပ်ပါးကောင်၊ ဘက်တီးရီးယား သို့မဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကို သယ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ အများအားဖြင့် ရောဂါပိုးသည် အင်းဆက်ပိုး" ကိုက်ခြင်း”ကြောင့် ကူးစက်ပါသည်။ ကူးစက်စေတတ်သော အရာများကို အရေပြားအောက်တွင် သွေးလဲလှယ်မှု ပြုလုပ်ခြင်းမှတဆင့် ကူးစက်စေပါသည်။ ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသော ရောဂါတစ်စုံတစ်ရာ အတွက်ကိုမျှ ကာကွယ်ဆေးများ မရနိုင်သေးပါ။ အများအပြားမှာ ကုသရန်နည်းလမ်းမရှိပါချေ။အပူပိုင်းဒေသ မိုးရာသီသစ်တောများအားလူသားများသွားရောက်စူးစမ်း လေ့လာကြခြင်း၊ သစ်တောပြုန်းတီးခြင်း၊ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်မှု မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းခရီးသွားများ တိုးမြင့်လာခြင်းနှင့် အပူပိုင်းဒေသများသို့ အခြား ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားလာခြင်းတို့သည် ထိုသို့သော ရောဂါများ ဖြစ်ပွားခြင်းကို မြင့်တက်လာစေပါသည်။
1. အပူပိုင်းဒေသတွင် ဖြစ်ပွားသော ရောဂါများအား သုတေသနပြုခြင်းနှင့် သင်တန်းပို့ချခြင်း အထူးအစီအစဉ် TDR
အာဖရိက၊ အာရှ၊ အမေရိကအလယ်ပိုင်းနှင့် တောင်အမေရိကရှိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆဲဒေသများရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီး ဘေးဖယ်ထားခြင်း ခံရသောသူအပေါင်းတို့အပေါ် အချိုးအစားမညီမျှစွာ ထိခိုက်စေသော၊ ဥပေက္ခာပြုထားသော ကူးစက်တတ်သည့် ရောဂါများကို အာရုံစိုက်ရန်အတွက် အပူပိုင်းဒေသတွင် ဖြစ်ပွားသော ရောဂါများအား သုတေသနပြုခြင်းနှင့် သင်တန်းပို့ချခြင်း အထူးအစီအစဉ် TDRကို ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ စီမံဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသော အေဂျင်စီဌာနကို ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ တည်ထောင်ထားပြီး၊ ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့၊ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ တို့က ပူးတွဲကမကထ ပြုကြပါသည်။
နမူနာအဖြစ် ယင်း၏အလုပ်အချို့တွင် အွန်ကိုဆိုက်ကားယာစစ်စ် မြစ်ရေထဲတွင် ပေါက်ဖွားသော အမဲရောင်လှေးများ ကိုက်ခံရခြင်းကြောင့် မျက်စိကန်းခြင်းအတွက် အိုင်ဗာမက်တင်ဆေး ကဲ့သို့ ရောဂါများအား ကုသနည်းအသစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ ငှက်ဖျားရောဂါအတွက် အာတီမက်စင်နင်ပေါင်းစပ်ပါဝင်သော ဆေးကုသခြင်း ACTကို အသုံးပြုရာ၌ တိုးတက် ကောင်းမွန်စေရန် ထုပ်ပိုးပုံ ထုပ်ပိုးနည်းက မည်သို့ကူညီပုံကို ပြသခြင်း၊ ခြင်ကိုက်ခြင်းနှင့် ငှက်ဖျားရောဂါကို တားဆီးကာကွယ်ရာတွင် ခြင်ထောင်များကြောင့် ထိရောက်မှုရှိပုံကို လက်တွေ့ပြသခြင်းနှင့်၊ ရပ်ကွက်လူထုကို အခြေခံပြီး ရပ်ကွက်လူထုက ဦးဆောင်သော အစီအစဉ်များက ဆေးကုသမှု မျိုးစုံ ဖြန့်ဝေခြင်းကို တိုးမြှင့်စေသည့် အကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ TDR ၏သမိုင်းကြောင်း လက်ရှိ TDR ၏ရောဂါပိုး အတန်းအစားများတွင် အောက်ပါစာရင်းများ ပါဝင်ပါသည်။
လက်ပရိုစီခေါ် အနာကြီးရောဂါ† သို့မဟုတ် ဟန်ဆဲန် ရောဂါသည် မိုင်ကိုဘက်တီးရီးယမ် လက်ပရေးကြောင့် ဖြစ်ပွားရသော နာတာရှည် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အနာကြီးရောဂါသည် အပြင်ပန်းဆိုင်ရာ အာရုံကြောများနှင့် အပေါ်ပိုင်း အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၏ ချွဲသလိပ်ထုတ်ပေးသော မျူကိုဆာတို့တွင် ဖြစ်ပွားသည့် ဂရန်နျူလိုမတပ်စ် ရောဂါပိုးတစ်မျိုးကြောင့် အဓိကအားဖြင့် ဖြစ်ပွားပါသည်။ အရေပြားထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှာ အဓိက မြင်သာသော လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်။မကုသဘဲထားလျှင် အနာကြီးရောဂါသည် တဆင့်ပြီးတဆင့် တိုးပွားလာပြီး အရေပြား၊ အာရုံကြောများ၊ ခြေလက်များနှင့် မျက်စိတို့ကို ထာဝစဉ်ပျက်စီးစေပါသည်။ လူအများတို့ ခံယူချက်သဘောထားနှင့် ဆန့်ကျင်စွာ၊ အနာကြီးရောဂါသည် ယခင်က လက်ပရိုစီဟု အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ဆိုမှု ပြုထားသော ဟေဗြဲကျမ်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည့် အနာရောဂါ ဖိစီးနှိပ်စက်ခြင်းရှိသည့် ဇာရက်ဟုခေါ်သောရောဂါကဲ့သို့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ လွယ်လွယ်နှင့် ပြတ်ကျခြင်း မဖြစ်နိုင်ပေ။
ချားဂက်စ်ရောဂါ အမေရိကန် ထရီပဲန်နဆိုမိုင်ယာဆစ်စ် ဟုလည်းခေါ်သည်သည် အမေရိကတိုက် အထူးသဖြင့် တောင်အမေရိကတိုက်တွင်ဖြစ်ပွားသော လူ့ကပ်ပါးကောင်ရောဂါ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်း၏ ရောဂါဖြစ်ပွားစေတတ်သော သတ္တိမှာ ထရီပဲန်နိုဆိုမာ ခရူဇီ ဟုခေါ်သော ဖလက်ဂျလိတ်ပရိုတိုဇုန် တစ်ခု ဖြစ်ပြီး သွေးစုတ်သော အဆက်စင် ပိုးကောင်ခေါ် ခြေတံရှည်သွေးစုတ် ပိုးကောင်တစ်မျိုးကြောင့် အများအားဖြင့် ကူးစက်တတ်သည်။ သို့သော် ကပ်ပါးကောင်များဖြင့် မသန့်ရှင်းသော အစားအစာများ စားမိခြင်း၊ သွေးသွင်းခြင်းနှင့် မိခင်မှဝမ်းပိုက်တွင်းရှိ သန္ဓေသားသို့ ကူးစက်ခြင်း ကဲ့သို့သော အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်လည်း ကူးစက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် လူဦးရေ ၁၆ သန်းမှ ၁၈ သန်းအကြား ကူးစက်ခံနေရပါသည်။
အဆုတ်နာရောဂါအတိုကောက် တီဘီ ကုသခြင်းမပြုပါက သေဆုံးသည့်နှုန်းမှာ ၅၀% ကျော်ဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလွန်အမင်းပျံ့နှံ့လျက်ရှိသော အဆုတ်သို့မဟုတ် အခြားတစ်ရှူးများ၌ ဘက်တီးရီးယားပိုး ကူးစက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ချောင်းဆိုးခြင်း၊ နှာချေခြင်း၊ စကားပြောခြင်း၊ နမ်းခြင်း သို့မဟုတ် တံတွေးထွေးခြင်းတို့မှ ထုတ်လွှတ်လိုက်သော အမှုန်အမွှားလေးများမှတဆင့် ကူးစက်သော ကူးစက်နိုင်သည့်ရောဂါဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ သုံးပုံတစ်ပုံကျော်မှာ တီဘီဘက်တီးရီးယားပိုး ကူးစက်ခံနေရပါသည်။
2. ရာသီဥတုနှင့် အပူပိုင်းဒေသ ရောဂါများ ပတ်သက်မှု
အပူပိုင်းဒေသရှိ" နိုင်ငံခြားမှ ယူဆောင်ခဲ့သည့်” ရောဂါများကို ခရီးသွားများ၊ စူးစမ်းလေ့လာသူများ၊ စသည်တို့အပြင် ဆရာဝန်များလည်း ပါဝင်သယ်ဆောင်ကြသည်ကို ကြာမြင့်စွာကတည်းက အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါသည်။ သိသာထင်ရှားသော အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ ပူပြင်းသောရာသီဥတုမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးရှိနေပြီး မိုးများစွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ပေါက်ပွားရာနယ်မြေများအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အမျိုးအစားစုံသော သဘာဝရေလှောင်ကန်များနှင့် လူသားများသို့ ပျံ့နှံ့ကူးစက်နိုင်သော တိရစ္ဆာန်တို့၏ ရောဂါများ ဇူဝါနောဆစ်စ် အရေအတွက်ပိုမိုများပြားခြင်း၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဗက်တာခေါ် ကူးစက်ရောဂါပိုး သယ်ဆောင်သော အင်းဆက်များ အများဆုံးရှိခြင်း တို့အပေါ် တိုက်ရိုက် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသော အပူချိန်သည် ဇီဝဗေဒနှင့်ဆိုင်သော သက်ရှိဇီဝရုပ်များ၏ အတွင်းနှင့်အပြင်ရှိ ရောဂါဖြစ်ပွားစေသော သတ္တိများ ပုံတူပွားများခြင်းကိုလည်း လွယ်ကူစေပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံအများစုမှာ အပူပိုင်းဒေသများတွင်ရှိနေသောကြောင့် လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်းများ မှာလည်း အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနေနိုင်ပါသည်။ လူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေများကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ထားသော ဘရာဇီးနိုင်ငံကဲ့သို့ အပူပိုင်းနိုင်ငံများသည် တကိုယ်ရေနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး၊ လူထုကျန်းမာရေးတို့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီး၊ အပူပိုင်းဒေသတွင်သာ ဖြစ်တတ်သော ရောဂါအများအပြားတို့ကို ဖယ်ရှားသုတ်သင်ခြင်း သို့မဟုတ် လျော့နည်းအောင် ပြုလုပ်ခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကူးစက်ပျံ့နှံ့နိုင်သော ရောဂါများကို တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရာတွင်လည်း ထူးထူးခြားခြား ရလဒ်များ ရရှိအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၊ဂရင်းဟောက်စ်သက်ရောက်မှုကမ္ဘာမြေကြီး၏လေထုလွှာပါးလာသောကြောင့်နေရောင်၏ပူနွေးမှုကိုကမ္ဘာ့လေထုကစုပ်ယူထားပြီး အရပ်မျက်နှာအနှံ့ပြန်လွှတ်ထုတ်ပေးခြင်း ကြောင့် ကမ္ဘာကြီးပိုမိုပူနွေးလာခြင်းနှင့် ရလဒ်အဖြစ် ကမ္ဘာ့အပူချိန် မြင့်တက်လာခြင်း တို့သည် အပူပိုင်းဒေသ ရောဂါများဖြစ်ပွားစေခြင်းနှင့် ပိုးမွှားကောင်လေးများကို ပိုမိုမြင့်သော တောင်တန်းထူထပ်သည့် အရပ်ဒေသများနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တောင်ပိုင်း၊ မြေထဲပင်လယ်ဒေသ၊ စသည်တို့ကဲ့သို့ ယခင်ကရောဂါဖြစ်ခဲ့ခြင်း မရှိသေးသောနေရာများအထိ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အရင်ဒေသများသို့ပါ ပျံ့နှံ့စေခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ဥပမာပေးရလျှင်၊ ကော်စတာရီကာနိုင်ငံရှိ မွန်တီဗာဒီး မိုးတိမ်သစ်တောတွင် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာခြင်းကြောင့် ခိုင်ထရီဒီယိုမိုင်ကိုးဆစ်စ် ခေါ် အပူပိုင်းဒေသ ရောဂါတစ်ခုကို ကြီးပွားစေသောကြောင့် မွန်တီဗာဒီး ဟာလီကွင်ဖားများ၏ ရေတစ်ပိုင်း ကုန်းတစ်ပိုင်း သတ္တဝါဦးရေကို အတင်းအကျပ် ကျဆင်းစေပါသည်။ဤနေရာတွင် တောင်များပေါ်တွင် မိုးတိမ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ အမြင့်ပမာဏကို ပိုမိုမြင့်လာ စေသောကြောင့်၊ ငြိတွယ်ပတ်ရစ်နေသော ပသိုဂျင်ခေါ် ရောဂါဖြစ်စေသောပိုး ဘီ ဒဲန်ဒရိုဘက်တစ်ဒစ်စ်ကို အကောင်းဆုံးအနေအထားဖြင့် ကြီးထွားအောင် ပံ့ပိုးပေးသော မိုးတိမ်ကို ထုတ်လုပ် ပေးပါသည်။
3. အပူပိုင်းဒေသတွင်ဖြစ်ပွားသော ရောဂါများကို တားဆီးကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကုသခြင်း
ဆေးဝါးဗေဒနှင့်ဆိုင်သော ကုသမှု ကူးစက်ခြင်း သို့မဟုတ် အများအပြား လာရောက်နှောင့်ယှက် ခံရပြီးသည့်နောက် ရောဂါကို ကုသရန်
အချို့သော အပူပိုင်းဒေသ ခြင်မျိုးများသည် ညဘက်တွင်အဓိက အစာရှာထွက်သောကြောင့် ညအချိန် ကူးစက်ခြင်းကို လျှော့ချရန်အတွက် အိပ်ရာပေါ်တွင် ခြင်ထောင်" အိပ်ရာပေါ်ရှိခြင်ကာကွယ်သောပိုက်များ” ဟုလည်း လူသိများသည်ထောင်ခြင်း။
ဆေးဝါးဗေဒနှင့်ဆိုင်သော မထိတွေ့ခင် ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်မှု ခေါ် ပရိုဖီလက်ဆစ်စ်ပတ်ဝန်းကျင် နှင့်/သို့မဟုတ် ဗက်တာခေါ် ရောဂါပိုးမွှားများနှင့် မထိတွေ့မီ ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရန်
ဆေးဝါးဗေဒနှင့်ဆိုင်သော ထိတွေ့ပြီးနောက် ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်မှု ခေါ် ပရိုဖီလက်ဆစ်စ် ပတ်ဝန်းကျင် နှင့်/သို့မဟုတ် ဗက်တာခေါ် ရောဂါပိုးမွှားများ ူနှင့် ထိတွေ့ပြီးနောက် ရောဂါကာကွယ် တားဆီးရန်
Wikipedia: အပူပိုင်းဒေသ ရောဂါများ